#Madagascar : ANOSY Niady an-trano ny mpitatitra | ONG Lalana Blog
#Madagascar : ANOSY Niady an-trano ny mpitatitra
Tsy nanaiky ny soson-kevitra hitazonana ny saran-dalana ho Ar 300 ny mpitatitra an-drenivohitra. Nifanditra tamin’ny mpitatitra miasa ivelan’ny renivohitra izy ireo.
Samy niaro tombontsoa. Nifanasa vangy teny Anosy, taorian’ny fihaonany tamin’ ny solontenam-panjakana omaly, ny mpitatitra miasa manodidina ny renivohitra (UCTS) sy ireo miasa an-drenivohitra (UCTU). Ny resaka fanitarana ny lalan-jotran’ ny UCTS ao anatin’ny faritra iasan’ny UCTU no fototr’izany.
« Miendrika fampiadiana ny samy mpitatitra ny fanekena ny fanitarana ny lalan’ny UCTS ato amin’ny faritry ny renivohitra iasanay, ka tsipahanay marindrano. Tokony hanome fahafaham-po ny mpanjifany aloha izy vao mitsofoka aty aminay, satria maro ireo mitaraina noho ny antsirambina ataon’izy ireo », hoy ny tabataban’ny mpitatitra an-drenivohitra.
Tsy laitra nakisoka
« Tsy mandrafy mpitatitra izahay fa vonona ny hiasa rehefa tsy hanao ny UCTU. Efa vonona ara-pitaovana amin’izany rahateo izahay », hoy kosa ny nasetrin’ny mpitatitra ao amin’ny UCTS.
Efa nahazo fankatoavana ary efa manomboka mikarakara ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka lalan-jotra vaovao ireo kaoperativa voakasik’izany, izay mitrandraka ny zotra D, E, F, G, H, I. Fantatra ihany koa fa tsy hampiakatra ny saran-dalany izy ireo ary hitazona izany ho Ar 300 amin’ny faritry ny renivohitra izay hidirany amin’ny fanitarana ny lalany. Tsy manaiky anefa ireo mpitatitra an-drenivohitra ka nandrahona ny hifampitady sy hanao he-tsika manokana hanoherana izany.
Nitazona ny heviny hatramin’ny farany amin’ny fitazonana ny saran-dalana ho Ar 400 ireo mpitatitra an-drenivohitra (UCTU). Izany dia nandritra ny fihaonany tamin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny minisiteran’ny Fitantanam-bola ary ny minisiteran’ny Solika, niaraka tamin’ireo mpitatitra miasa manodidina ny renivohitra (UCTS). Tsy nahoan’izy ireo ary tsy nekeny mihitsy ny soson-kevitra natolotr’ireo minisitera telo ireo dia ny fametrahana vidin-tsolika manokana sy tetik’asa fanatsarana ny fampidiram-bola ho an’ny mpitatitra ary ny fanonerana ny hetra sy ny hanalefahana izany amin’ny taona ho avy.
« Efa zakan’ny vahoaka ny saran-dalana Ar 400, ka tokony hijanona amin’izao. Tsy mandaitra ireo soson-kevitra ireo satria efa nandramana fa tsy nety. Ny fampihenana ny vidin’ny solika ihany no vahaolana aminay », hoy ny fanamarihana nataon’ny filohan’ ny UCTU, Andriambinin­tsolomora Bernardin.